“Go’doon ayaynu ku jirnaa wax saaxiiba kuma lihin aduunka, halkii aynu taagnayn maalintii aynu”… xildhibaan Obsiiye | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Go’doon ayaynu ku jirnaa wax saaxiiba kuma lihin aduunka, halkii aynu taagnayn maalintii aynu”… xildhibaan Obsiiye
Hargaysa (SDWO): Xildhibaan Axmed Muuse Obsiiye, oo ka tirsan mudaneyaasha golaha Guurtidda Somaliland ayaa walaac ka muujiyay xaaladda adag ee xagga nolosha ee haysata dadka shacabka ah, taasoo uu sheegay in haddii aan dhakhso wax looga qaban in ay halis gelin karto bulshadda.
Waxaanu xildhibaanku tilmaamay dhibaatooyinka ugu waa weyn ee wakhtigan ka taagan dalka ay ka mid yihiin sixir barar, qiimo dhac ku yimid lacagta dalka iyo shaqo la’aanta dhalinyaradda oo meel xun maraya.
Xildhibaan Axmed Obsiiye, oo maanta xarunta golaha Wakiiladda warbaahinta kula hadlay waxa kaloo uu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland isagoona sheegay in go’doon xagga siyaasadda arrimaha dibadda ah ay Somaliland ku jirto.
Sidoo kale xildhibaanka ayaa ka hadlay xaalada siyaasadda gudaha Somaliland, goleyaasha baarlamaanka iyo dagaalka Tukaraq iyo arrimo kale.
Daawo Xildhibaanka oo Arrimahaas Ka Hadlayay: